धिकांश नेपाली हरूलाई कालो चिया भन्दा पनि दूध चिया बढि मन पर्छ। तर वैज्ञानिकहरू भन्छन् दूधको एक थोपाले चियाको पुरै फाइदालाई शून्य बनाइदिन्छ। त्यस्तो कसरी हुन्छ?
के हुन्छ चियामा?
अधिकांशले आनन्दको लागि, न्यानो गराउनको लागि चिया पिउने गर्छन्। फेरि चियाको (कालो चियाको) स्वास्थ्यमा फाइदाहरू पनि टन्नै छन्। प्राचीन समयमा चीन, भारत र नेपाल लगायत एसियाली भू-भागहरूमा कालो चियालाई औषधीको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दथे।
यसको एउटै मात्र कारण भनेको, दूधमापाइने प्रोटिन ‘क्यासिन’ले गर्दा चियामा पैदा हुने ‘क्याटेचिन’को मात्रामा कमि हुने गर्दछ, जसले रक्त धमनीमा राहत पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमीका खेल्ने गर्दछ।